ရွေးချယ်မှု၏ Paradox (မှားယွင်းတဲ့အမှားအယွင်းများ) ။ | Linux မှ
ရွေးချယ်မှု၏ Paradox (မှားယွင်းတဲ့အမှားအယွင်းများ) ။
ဒိုင်ယာဇီပန် | | GNU / Linux များ
ရွေးချယ်မှုများလေ၊ စိတ်ပညာရှင် Barry Schwartz ရေးဆွဲသောရွေးချယ်မှု၏ဝိရောဓိသည်တိုတောင်းသည် အမည်တူ၏စာအုပ် ယခုနှစ် 2004 ခုနှစ်။
သူ၏အဆိုအရရွေးချယ်စရာများများသောအားဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုမဟုတ်ဘဲဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ လွတ်မြောက်မှုကိုခံစားမည့်အစား၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလေဖြတ်စေသည်။ ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသည်၊ ၎င်းသည်တစ်ခုကိုပြည်နယ်တစ်ခုသို့လျှော့ချစေသည် စိတ်ပျက်စရာ။ သွက်ချာပါဒကိုကျော်လွှားရင်တောင်ခံစားရတယ် စိတ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်း ရွေးချယ်စရာနည်းသောနေရာမျိုးတွင်ထက်။
Schwartz ကပိုမိုရွေးချယ်မှုသည်အကျိုးရှိမည်ဟုစိတ်ကူးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ အမှားသည်နောင်တွင်နောင်တရခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူအတွက်နောင်တရခြင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားသောအခွင့်အလမ်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုအကဲဖြတ်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း (ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်နာကျင်မှုကနေနုတ်ထွက်ရန်စဉ်းစားသောအခါဆုံးဖြတ်ချက်ချရခက်သည်) မျှော်လင့်ချက်များမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်၎င်းတို့မပြည့်စုံပါကအပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရစေနိုင်သည် (အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်ပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုထက်နည်းနည်းသာရွေးချယ်လျှင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိလျှင်တာဝန်ရှိသူမှာမှားယွင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ချသူဖြစ်သည်) ။
သိသာထင်ရှားတဲ့စားသုံးမှုပြtheနာကိုဒီမှာဆွေးနွေးထားသည်။ ဒါပေမယ့်သင်တန်းကဒီဝိရောဓိကိုသုံးနိုင်သည် linux တွင်စိတ်စိတ်အမွှာမွှာကွဲပြားခြင်း၏ထာဝရပြproblemနာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသာမန်အားဖြင့်ဝိရောဓိအဖြစ်မခံဘဲ၊ မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်။ မှားယွင်းတဲ့အမှားတွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသည် ပိုလျှံကိုအပြစ်လွတ် လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိခြင်း၏အကြောင်းပြချက်များအကြောင်းအကြောင်းပြချက်များဖြင့်“ ငါဟာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ခွဲဝေပြီးမျှဝေလို့ရတယ်။ ”
ငါသုတေသနပြုနေစဉ်ရွေးချယ်မှု၏ဝိရောဓိအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားသည့်ပထမ ဦး ဆုံးဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည် စက်တင်ဘာ ၂၀၀၄ (Ubuntu မမွေးဖွားမှီတစ်လအလိုတွင် Schwartz ၏စာအုပ်ထုတ်ဝေပြီးနောက်အချိန်အကြာကြီး) သို့သော် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ရွေးချယ်မှုမှားယွင်းမှုသည်မွေးဖွားလာသည် ဒီစာ Alan Jackson ရေးသားသော RedHat မေးလ်စာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်
> Linux ဆိုတာရွေးချယ်မှုအကြောင်းပါ။
ဒီနှစ်မှာငါသာတစ်ခုတည်းရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှတ်စုကိုစုပေါင်းအသိစိတ်ကနေဖယ်ထုတ်ပစ်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာရောဂါတစ်ခုပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်နေရာရာမှာတစ်ယောက်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ OCD ပြောင်းထားတာကြောင့်သူတို့အပေါ်ဘယ်လောက်ရဲရဲရင့်ရင့်လဲဆိုတာနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာပါတယ်။ သူကငါ့နောက်ကျောမှာထိုင်သူအမေကိုဖိတ်ကြားမဟုတ်ပါဘူး။
စားသုံးသူတစ် ဦး အနေဖြင့်၊ သင်၌သင်သုံးသော Linux တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Linux သည်မည်သည့်သဘောမျိုးဖြင့်မဆို _about_ ရွေးချယ်မှုရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သင်ကားများ ၀ ယ်နိုင်ပြီးကားများစွာရွေးချယ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဂျူဂျူနှင့်သွေးခုန်နှုန်းနှင့်ပတ်သက်သောတိုင်တန်းချက်များသည်လုံးဝမှန်ကန်သည်၊ သို့သော်ဖြေရှင်းချက်သည်အရာနှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းမပို့ရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်နှစ်ခုလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းပို့ရန်ကြိုးစားပါက၎င်းနှစ်ခုကြားအကူးအပြောင်းပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းကိုလည်းသင်လိုအပ်သည်။ ယခုတွင်သင်သည်တစ်ခုတည်းအစားရွေ့လျားနေသောအပိုင်းသုံးပိုင်းရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ _six_ (အပိုင်းသုံးပိုင်းနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုသုံးခု) အချက်အားဖြင့်ပျက်ကွက်မှုနှုန်းတက်သွားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သင်္ဘောတင်ချိန်တွင် ၁၀၀% ပြည့်စုံသောအင်္ဂါရပ်များရရှိရန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လုံလောက်သောအားထုတ်မှုမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့်ပြောထားသည် တနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်္ဂါရပ်များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေါင်းစပ်ထားသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်ကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏နောက်ဆုံးနှင့်အကြီးမားဆုံးပြသနိုင်မှုဖြစ်ရန်ရည်မှန်းချက် ၁ ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်သင်လုပ်ဆောင်သည်။
ဆော့ဗ်ဝဲကခက်ခဲတယ်။ ၎င်းကိုပြင်ဆင်ရန်နည်းလမ်းမှာ၎င်းကိုပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကော်ဇောအောက်တွင်လှည်းမတင်ရ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်မှုအတွက်မည်သည့်နေရာတွင်မည်ကဲ့သို့ပုံစံချခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုအားထုတ်မှုများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တရားဝင်ပုံဖော်ခြင်း၊ စက်ကိရိယာတစ်ခုကဲ့သို့သောထောင့်ကျိုးပြproblemsနာများအတွက် spike ဖြေရှင်းနည်းများကိုမည်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဖြန့်ဖြူးပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ juju အဟောင်း stack ထက်ပိုဆိုးလုပ်ဖို့ဖြစ်ပျက်။ သို့သော် "Linux မှရွေးချယ်ခြင်း" သည် "အရာအားလုံးကိုတင်ပို့ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူမှသူတို့၏အသံမည်သို့မလည်ပတ်စေချင်သည်ကိုရွေးချယ်ရန်" ဟူသောယုတ္တိဗေဒကွင်းဆက်သည်မှားယွင်းသောအမှားများနှင့်စတင်သည်။
ဘလော့ဂ်ပို့စ်အရသိရသည် ohjeezlinux ပါFedora 8 ကိုဖြန့်ချိလိုက်သည့်အခါသတင်းစကား၏အခြေအနေမှာပထမ ဦး ဆုံးထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည် အချစ်ဇာတ်လမ်းFedora7တွင် Juju Fireware stack ထည့်သွင်းထားပါသည်။
သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာပြproblemsနာတွေရှိပြီးအဆိုပြုသူတွေရှိတယ် checkbox တစ်ခု သင်၏အသံစနစ်သို့မဟုတ်သင်၏ firewire stack ကိုရွေးချယ်ရန်။ ဒါပေမယ့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြtheနာက checkbox တစ်ခုပါ3အားဖြင့်အလုပ်ပွား (အပိုင်းတစ်ခုစီ, တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားအလုပ်), နှင့်6ကအလားအလာ bug တွေ (3 အစိတ်အပိုင်းများနှင့်3interaction က) ။ ဒီမှစ။5နှစ် .......
ငါက default option တစ်ခု၏မရှိခြင်းကိုအပြစ်တင်ဖို့လည်းစဉ်းစားမိပေမယ့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရေရှည်တည်တံ့ရန်ခက်ခဲသောအရာဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာတွေ့ရသည် linux မုန်းတဲ့ဘလော့ဂ် ပုံမှန် option ကို၏မရှိခြင်းအကြောင်းကို ဒီတော့အလုပ်လုပ်တယ် Desktop ပေါ်ရှိ Linux အတွက် LINP (LAMP) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် Linux သည်ဆာဗာများပေါ်တွင်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
ယခုခေတ်တွင် Ubuntu သည် desktop ပေါ်တွင် linux အတွက် default option ဖြစ်လာသည်။ Linux အတွက်တစ်ခုခုတီထွင်ချင်လား။ Ubuntu (Steam, baby) အတွက်ပထမဆုံးလုပ်ပါ။ linux အတွက်ယာဉ်မောင်းအသစ်လား။ သူတို့ကို Ubuntu, etc, etc စသဖြင့်စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ စတိဗ်ဂျော့ဘ် ဘယ်တော့မှမ ငါသူလုပ်ခဲ့တာကိုလုပ်ဖို့ Schwartz ရဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့မေးကောင်းမေးနိုင်တယ်။ Richard Stallman သည်ဤဝိရောဓိအကြောင်းကိုမည်သို့သဘောထားမည်နည်း။
သို့သော်အတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ချစ်သူ အမြင်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားအမှတ်ပေးသည်။ ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပဲ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် Linux ကြိုးစားနေသောသူတို့အဘို့သို့သော်အထူးလိုအပ်ချက်များနှင့်တိကျသောပန်းတိုင်များရှိသောသုံးစွဲသူများအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုထက် ပို၍ ရှိခြင်းသည်၎င်းတို့ကိုအမှန်တကယ်အကျိုးပြုသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Linux ကိုကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောစက်များအနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့်ယင်းကိုမျှော်လင့်ရသည် အသုံးပြုသူများသည် install လုပ်ရန် distro ဖြစ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချသည် (၎င်းသည်ပေးဆောင်သော distro ကိုထည့်သွင်းသောအခါ ပိုမို၍ ခက်ခဲလာသည်) ။
သွားကြရအောင်, ရွေးချယ်မှုသည်ကြိုက်နှစ်သက်သူနှင့်သာနှစ်သက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ distro သည်ဆက်လက်တည်ရှိသင့်သည်ဟုပြောဆိုသောအခွင့်အာဏာမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ပျော်မွေ့ကြပါစို့။ မဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားပိုမိုဆိုးရွားသည့်မှားယွင်းသောမှားယွင်းသောမှားယွင်းသောအယူအဆအတွင်း၌သာဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ် (Windows, OSX၊ GNU / LInux)၊ အခြားနည်းလမ်းများ (BSD, Haiku, OpenSolaris) စသည်တို့ကိုစွန့်ပစ်သည်။ ကိုယ့်ပိုလျှံထောက်ပံ့ရေးတရားမျှတ။ ဒီနောက်ဆုံးအပိုဒ်မေ့လျော့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » ရွေးချယ်မှု၏ Paradox (မှားယွင်းတဲ့အမှားအယွင်းများ) ။
63 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ငါထင်တယ် Linux သည် Android နှင့် iOS application များနှင့်အနည်းငယ်နီးကပ်လာသည်။ ထိုကမ်းလှမ်းချက်သည်မည်သူမဆို download လုပ်၍ မရပါ။ ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲသူများက၎င်းကိုအသုံးပြုပါက distros အမြောက်အမြားရှိလိမ့်မည်ဟူသောအချက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ လွတ်လပ်မှုသည်အဆင်ပြေသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်မည်သူကမျှဂရုမစိုက်သောအချက်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၎င်းသည် "လွတ်လပ်မှု vs. အလုပ်လုပ်သောအရာများ" ၏မှားယွင်းသောမှားယွင်းသောယူဆချက်ထဲသို့အမြဲတမ်းကျရောက်သည်
လွတ်လပ်မှုဆိုတာဘာမှမဆိုင်ပါဘူး၊ ရွေးချယ်မှုများစွာနှင့် CRAP အားလုံးသည်“ လွတ်လပ်မှု” နှင့်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ပြtheနာ၏အကြောင်းအရင်းမှာအရည်အချင်းပြည့်ဝသောအရာတစ်ခုခုလုပ်ရန် Talent မရှိခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုများစွာရှိခြင်းကြောင့်အလုပ်တစ်ခုကိုပြီးမြောက်ရန်ပူးပေါင်းမည့်အစားတစ်ခုချင်းစီသည်သူတို့၏စတိုးဆိုင်ကိုသီးခြားစီ ခွဲ၍ ထားလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည် ဘုန်းအသရေကိုခံယူသောသူသည်»။
“ လွတ်လပ်မှု” သည်ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာအားနည်းချက်များသို့မဟုတ်မည်သည့်အရာမဆိုပြည့်စုံသောမပြည့်စုံသောစီမံကိန်းသည်အတူတကွတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်။ ဖြစ်သည်။
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး။ အချို့ကိစ္စများတွင် Linux ရှိရွေးချယ်စရာများသည်များလွန်းသည်ဟုလည်းကျွန်တော်ထင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည် header distro မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့အား distrohopping သို့ပို့ဆောင်သည်၊
ချာလီ - ဘရောင်း ဟုသူကပြောသည်
"ရွေးချယ်စရာတွေရှိတာကောင်းပေမယ့်သိပ်မများပါဘူး" ... တကယ်လား? လွတ်လပ်မှုအလွန်များပြားသည်ဟုပြောသကဲ့သို့ငါထင်သည်၊ ထို့နောက်မိမိကိုယ်ကိုမေးရမည့်သူနှင့်မည်မျှရွေးချယ်ရန်လုံလောက်သည်ကိုမည်သူကဆုံးဖြတ်မည်နည်း။ ဘာလဲ?
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းမရှင်းပြခဲ့ဘူး၊ ငါဟာဘ ၀ အတွက်ယေဘူယျမဟုတ်ဘဲ၊ ငါကရွေးချယ်ရန် distros တွေအများကြီးရှိတဲ့အခါ, သင်တို့အဘို့ "ပြီးပြည့်စုံသော" ပုံရသည်တ ဦး တည်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ရန်အချို့သောအလုပ်ကြာကြောင်းပြောကြသည်။
Open source နှင့် Linux ကိုယေဘုယျအားဖြင့်သဘာဝကမ္ဘာနှင့်အသင့်တော်ဆုံးသောရှင်သန်မှုအဖြစ်အမြဲတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အတက်ကြွဆုံးသောတီထွင်သူများ၊ အများဆုံးအသိုင်းအဝိုင်း၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည့် / သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကမ်းလှမ်းသောစီမံကိန်းများသာလျှင်ရှင်သန်လိမ့်မည်။
သဘာဝကမ္ဘာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် distros များပျံ့နှံ့ခြင်းသည်သက်ရှိသတ္တဝါများကြားတွင်အမိန့်များ၊ အမိန့်များ၊ မိသားစုများနှင့်မျိုးစိတ်များများစွာရှိသည်။ သဘာဝရွေးချယ်ခြင်း၏ဝိရောဓိသည်မျိုးစိတ်တစ်ခုချင်းစီ၏နောက်ဆုံးရှင်သန်မှုကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုစီ၏တိကျသောနယ်ပယ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းသည် distros များနှင့်အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပွားနေသကဲ့သို့လိုအပ်ချက်များနှင့်တစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်ရှိလိမ့်မည်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်အရသာတွေလိုတယ်၊ ဒီဟာကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲရဲ့အလှတရားဖြစ်တယ်၊ သက်ရှိသက်ရှိနဲ့တူတယ်။
အသိပညာသေချာပေါက်စျေးကွက်စည်းမျဉ်းများကအုပ်ချုပ်မထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ "ပိုလျှံထောက်ပံ့ရေး" ဟူသောဝေါဟာရကိုလျှောက်ထားနိုင်လျှင်ငါမသိရပါဘူး။
software အကြောင်းပြောနေတာပါ။ ငါသာအသိပညာအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီငါ့အမှန်ကန်သောမထင်ထားဘူး။
ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ဆောင်းပါးကိုဖတ်နေတုန်းပဲ။ စကားမစပ်ငါဆောင်းပါးတကယ်ကြိုက်တယ်။
ပြီးတော့…ကျနော်တို့ µkernel xD တွင်ဆွေးနွေးရန်ခေါင်းစဉ်အသစ်ရှိသည်
ဒီအပြင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဖို့ကျွန်တော်အနှောင့်အယှက်ပေးလို့အရမ်းနက်ရှိုင်းလွန်းလို့ဒီမှတ်ချက်မှာ xD နောက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုလုပ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
အလွန်အကျွံထောက်ပံ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တူညီသောအရာသည်အင်တာနက်ပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးချနိုင်သော်လည်းသူတို့၏စိတ်ထဲတွင်မည်သူမျှသတင်းအချက်အလက်နည်းပါးမှုအတွက်တောင်းဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊
သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်ရန်အသုံးပြုသူ၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။ မည်သူမျှရရှိနိုင်သည့် distros များအားလုံးကိုကြိုးစားရန်မည်သူမျှအတင်းအကျပ်မလုပ်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပိုလျှံမှုအတွက်ပြtheနာကိုဂူဂဲလ်ကဖြေရှင်းခဲ့သည် ဂူဂဲလ်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ လူများသည်သတင်းအချက်အလက်အလွန်အကျွံကိုစစ်ထုတ်သည်။ ထိုအခါငါက google သင်ကြားခြင်းနှင့်သင်ကြားမှုကိုရပ်တန့်သောအရာကို၏ဆွေးနွေးမှုသို့မဝင်ဘို့ပိုပြီးမပြောကြဘူး ... အဆုံး၌ငါတို့ Google ကအခြားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပြသသောအရာထက်ပိုပြီးပြသသောအရာကိုကြိုက်နှစ်သက်လေ့။ ပြီးတော့သက်သောင့်သက်သာရှိခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းတွေ facebook / twitter မှာတင်ထားတဲ့သတင်းတွေကတဆင့်သိခဲ့ရတယ်။
ငါ Alan Jackson ပြောတာကိုငါသဘောတူတယ် ငါ Linux ကိုစလုပ်တုန်းက ((၇ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်) အသံပြproblemsနာတွေကြုံခဲ့ရပြီး alsa, pulseaudio, gstreamer, စီးပွားဖြစ်ကုဒ်နံပါတ်များ (mp7, divx ... ) ၏ပင်လယ်အလယ်တွင်လုံးဝရူးသွပ်သွားသည်။ ဘာကျန်သေးလဲ။ နောက်ဆုံးမှာဖြေရှင်းချက်ကကွန်ပျူတာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတပ်ဆင်လိုက်တဲ့ shit ပမာဏကပြeverythingနာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘဲဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတာပဲ။
ရွေးချယ်စရာတစ်ထောင်နှင့်တစ်ခုရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ ပြtheနာမှာအနည်းဆုံး ONE တစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်ပြfirstနာဖြစ်ပြီးပထမ ဦး ဆုံးအနည်းငယ်ဖုံးအုပ်ခြင်းမရှိဘဲဖုံးအုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါးနှင့် @Ares လုံးဝသဘောတူသည်။
၎င်းတို့သည်စနစ်သည်သူတို့လိုချင်သောအလုပ်မလုပ်ကြောင်းတွေ့မြင်ကြပြီး ၄ င်းတို့သည်လမ်းဆုံလမ်းခွကိုစတင်သည်၊ သို့သော်အခြားအမှားများနှင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ဖြန့်ဝြေခင်းကိုစည်းလုံးညီညွှတ်ခြင်း (သို့) ဆွေးနွေးခြင်းကိုရည်ညွှန်းခြင်းကပိုကောင်းသည်။
ဒါပေမယ့်သိပ်မလွယ်ပါဘူး အကယ်၍ လူတို့၌ညှိနှိုင်း။ မရသည့်ထင်မြင်ယူဆချက်များရှိပါက၊ ဘယ်လမ်းကြောင်းကိုရွေးရမယ်ဆိုတာအရမ်းခက်တယ်။
သိသာထင်ရှားတဲ့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများ, ရွေးချယ်ဖို့ပိုအိုင်တီကုန်ကျစရိတ် ... နိမ့်ကျသည်။
သူတို့အားလုံးမှာ Mac အမြောက်အမြားရှိတယ်၊ သူတို့ကတတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ငွေကြေးအမြောက်အများမလိုအပ်ဘဲသာမန်ထက်သာတဲ့ငွေပမာဏကိုသာပေးဆပ်ရမည့်သူအတွက်စီးပွားဖြစ်စျေးနှုန်းသာမကသုံးစွဲသူများကြုံတွေ့ရသောစတော့ရှယ်ယာတွေပါ ၀ င်သည်။
Mac နှင့် ၀ င်းဒိုးများသည်စျေးကြီးပြီး၊
GNU + Linux သည်အခမဲ့၊ အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်ကြားမှုနှင့်လေ့လာမှုကိုအားပေးသည်၊ သို့သော်ငြင်းပယ်သည်။
နိဂုံး။ ။ ထိုလူထုံများအတွက်သူတို့၏ထူးခြားချက်ကိုမပြရန်နှင့်သူတို့၏လူထုံကိုအပြစ်တင်လိုသောလူထုံများအတွက် Idiots များပြုလုပ်ခဲ့သောဤရှင်းလင်းချက်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည် fuck ဆိုတဲ့။
adj. -com ။ အကြောင်းပြချက်မရှိခြင်း Alelado ။
နာမ် ကျပ်မပြည့်သူ။ ပြုမူပြောဆိုသူသို့မဟုတ်ဉာဏ်ရည်နည်းပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ။
msx၊ ဖိုင်ဘာအနည်းငယ်ယူရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။ ပြီးတော့သင်ကဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
သင့်ရဲ့ရန်လိုတဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့သင်ဝေဖန်သူတွေထက်သင့်ကိုယ်သင်အလားတူ (သို့) နိမ့်အဆင့်ကိုသာလျှော့ချလိုက်တာပဲ။
msx သည်ယခုအသုံးမပြုတော့သော FSF ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူ၏စကားရပ်ဒါ stallmanesque ။
Fanboys တွေအရမ်းပျော်ကြတာမို့အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ကောင်းသောအဟောင်းစတိဗ်ကသူတို့အတွက်စဉ်းစားပြီးသူတို့ဘာလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ah! အနည်းငယ်ပါးသောသူများအတွက်သူ၏သူငယ်ချင်း Bill ကအလှဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သော်လည်းအလွန်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိဘဲ ဦး နှောက်အူကျရောဂါမဖြစ်စေရန် Windows ၏ရွေးစရာများစွာကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
လူသားမျိုးနွယ်စုများ၏အနာဂတ်သည်အလဟ is ဖြစ်သွားသည်၊ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောတိရိစ္ဆာန်များသည်အထုပ်ထဲတွင်လျှောက်လှမ်းနေပြီးအပြုအမူပုံစံများကို "ဥာဏ်ရည်" ၏တစ်ခုတည်းသောနိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်ထပ်ခါထပ်ခါတွေ့ရသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများ, ရွေးချယ်ဖို့ပိုကုန်ကျစရိတ် ... နိမ့်ကျသောအရာများအတွက်
ပထမဆုံးမှားယွင်းတဲ့အမှားအယွင်းကတော့ငါတို့စတင်ဆိုးဆိုးရွားရွားစတင်ခဲ့သည်။ မည်သူမျှရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီအရာရာကိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်အချိန်ဖြုန်းတီးရန်ဆန္ဒမရှိခြင်းကြောင့်မည်သူမျှယုတ်ညံ့သည်မဟုတ်။ တစ်နှစ်လျှင် ၃၆၅ ရက်ကြာစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် distros များပြောင်းလဲခြင်းသည်သင်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုလုံးလုံးလျားလျားသုံးရန် ပို၍ စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်သည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကိုလူထုံမခေါ်မီပုံပြင်ကိုလျှောက်ထားပါ၊ မရေးသားမီထုံးကိုယူကာအသက်ရှူပါ။ ၄ င်းကိုစဉ်းစားရန်မမေ့ပါနှင့်။
ရေခဲမုန့်ဆိုင်သည်ရေခဲမုန့်အရသာနှင့်ပြည့်စုံပြီးမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှစားသောက်ဆိုင်သို့မဟုတ်ကားအရောင်းကိုယ်စားလှယ်မှမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်အားတစ်သက်တာကုန်ဆုံးစေခြင်းမရှိချေ။ သငျသညျအနညျးငယျအရူးသို့မဟုတ် msx ၏ယူဆချက်မှနျမှနျလြှငျထိုအကွောငျးအရာဖွေခွငျးအနညျးငယျသာရှိသညျ။
Linux ရှိပြproblemနာသည် supply ၏ပိုလျှံမှုမဟုတ်ပါ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်တွင်ပြproblemနာမှာ supply of Absence (ယနေ့တွင်အဘယ်သူမျှမ distro (*) သည် OSX နှင့် Windows နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်) ဤအကြောင်းကြောင့်လူတစ် ဦး သည်အစဉ်အမြဲမကျေနပ်မှု၊ ရှင်သန်နေမှု၊ ရွေ့လျားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်“ ကြိုးစားအားထုတ်မှု” ကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အမှားများကိုခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ ချို့ယွင်းချက်များကိုမျက်စိမမြင်ခြင်း၊ အသက်ပြင်းပြင်းရှူခြင်းနှင့်စိတ်ရှည်ခြင်းတို့ကိုအမြဲတမ်းနေထိုင်သည်။ OSX သို့မဟုတ် Windows သို့ "ရောင်း"; သူတို့ဟာဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေလို့သူတို့က "စည်သွတ်ဘူးသော option" မဟုတ်ဘဲသူတို့ဟာအမှန်တကယ်ရွေးချယ်မှုများဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ပြ"နာသည် "အလွန်အမင်းထောက်ပံ့မှု" ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ပြproblemနာမှာထာဝရရှာဖွေခြင်းနှင့်အဆုံးမဲ့လမ်းသို့ဆက်သွားခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုလှည့်စားခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးဘတ်စ်ကားနှင့်အတူနေခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အားလုံးစစ်မှန်သောရွေးချယ်စရာမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့။
အဓိကပြthingနာမှာ distros (*) အားလုံးသည်တူညီသောအရာများဖြစ်ပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားသောကွဲပြားခြားနားမှုများ (၎င်းတို့အားလုံးသည်အတွေးအခေါ် (သို့) စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်)၊ ပျံ့နှံ့နေသောအားသာချက်များနှင့်တစ်ခါတစ်ရံမီးခိုးငွေ့များဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အခြားအရာထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုနှင့်အတူသော်လည်းကောင်းနားမလည်နိုင်လောက်အောင်ပိုဆိုးတစ်ခုခုနှင့်အတူကတက်သည်။
ရေခဲမုန့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်မည်သည့်ချောကလက်နှင့်မည်သည့်စတော်ဘယ်ရီဖြစ်သည်ကိုအလွယ်တကူခွဲခြားသိနိုင်သည်။ ရေခဲမုန့်ဖြစ်ပြီးအပူပိုင်းသစ်သီးအရသာသည်ကမ်းလှမ်းချက်၏ အချိန်မှစ၍ ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်နိုင်သောရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ပြီးတော့သင်လိုချင်တာကိုရွေးချယ်လိုက်ရင်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရှိလိမ့်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ကျပန်းမျက်မမြင်ရွေးချယ်လိုက်ရင်တောင်သင်လည်းကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုခံစားရမှာပါ။ အရသာတွေအားလုံးထဲမှာအုန်းသီးအရသာကတကယ်တော့ရေခဲမုန့်ပဲရှိပေမယ့်ပျောက်နေသေးတယ်ဆိုတာခင်ဗျားမမြင်မိပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကျပန်းရွေးချယ်ခြင်းပင်ရှာဖွေမှုလမ်းကြောင်း၏အဆုံးသို့ရောက်လိမ့်မည်။
အဆိုပါဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အတူကစုံတွဲများနှင့်အတူဖြစ်ပျက်, သင်အချိန်ကိုရည်စူးခြင်းနှင့်သင်စိတ်ပျက်ရတစ်ချိန်ကသင်ကသူတို့ကိုသာသိနိုင်ခြင်း, ၎င်းသည် Linux distros ၏ရပ်ကွက်သည်မကောင်းသောရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်စုံတစ်ရာမျှမရှိနိုင်သောကြောင့်“ အိမ်ထောင်ရေးပစ္စည်း” ကိုရှာရန်သင့်အားတစ်သက်လုံးကြာလိမ့်မည် (ထိုကဲ့သို့သော“ အိမ်နီးချင်း” ကိုရရှိသောသူများသည်ကြောက်လန့်ပြီး၊ ဆက်ဆံရေးမှအရာမျိုး) ။
(*) ကျွန်ုပ်သည် distro ဟုဆိုသော်လည်း၎င်းသည်အချို့သော application များနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပါသည်။
Relax, dude, ဘယ်သူ့ကိုမှဒီလိုမျိုးလာစော်ကားဖို့မင်းကိုဘယ်သူမှမပြောခဲ့ဘူး၊ သူတို့ခေါင်းကိုမချိုးချင်တဲ့သူတွေကိုသူတို့လူထုံအဖြစ်အလွန်အမင်းဂရုမစိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားပြီးသူတို့သုံးတာကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးသောအရာ။
ဘဝပြpeopleနာတွေ၊ အရာအားလုံးနဲ့အတူဘဝရှိသူတွေ၊ ကွန်ပျူတာအပြင်ဘက်မှာရှိလား၊
+ 1000 ^ 1000
သင်သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖောင်ဒေးရှင်း (GNU မျက်မြင်သက်သေများနှင့်အတူပါ ၀ င်သူ) တစ် ဦး လား။
gnu xDD ၏မျက်မြင်သက်သေများ…သူတို့ဟာ aho polo ရှပ်အင်္ကျီတွင် ၀ တ်ဆင်ထားတဲ့မင်းရဲ့တံခါးကိုလာခေါက်ဖို့ပဲလိုတယ်
ယခုအချိန်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ပိုမို၍ တွေ့ရသည်။ သူတို့ကကယ်တင်ရှင် Saint Ignatius ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိကမ္ဘာပေါ်ရှိစီးပွားဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးကိုသုတ်ပစ်လိမ့်မည်ဟုသူတို့ပြောနေကြသည်။
Pandev သည်သူသည် Mac အသုံးပြုပြီး၎င်းသည်ကောင်းမွန်သော operating system တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလက်ခံခြင်းအတွက်အယူမှားသူအဖြစ်ယူမှတ်ခံရလိမ့်မည်။
ကမ္ဘာကြီးသည်အလွန်သေးငယ်သောကြောင့် Panda သက်သေများနှင့် Tux Taliban တို့နှင့်အတူရှိသောကြောင့်ထိုနေရာ၌သာရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။
Messiah Tux၊ Linus Torvalds / Open Panda တို့၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုမကောင်းသောမိုက်ကရိုဆော့ဖ် / IE ပိတ်ဆို့ထားသောဆော့ဝဲလ်လက်ဝါးကြီးအုပ်မှကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်မည်ဟုကတိပေးသူများကသင့်အားတံခါးခေါက်။ မရပါ။ လိမ္မော်ရောင်အင်္ကျီတစ်ထည်သို့မဟုတ် Tux ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့သလား။ Windows / OSX / Chrome / Opera ကိုသုံးရင်သတိထားပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Tux / etc ရဲ့ openmind inquisitors ကသင့်ကိုလောင်ကျွမ်းစေလိမ့်မယ်။ သူတို့ကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောဖို့တောင်မစဉ်းစားတော့ဘူး။
ကျေးဇူးပြု, ကိုယ်ကျင့်တရားရှိသည်သောသူသာ ဒီလိုမျိုးပြောပြီးမထီမဲ့မြင်ပြုတာဟာ ၀ င်းဒိုးလူမျိုးတွေပဲ။ သို့သော် Linux၊ Open Source၊ Free Software စသည်တို့ကိုဝန်းရံထားသည့်အရာအားလုံးသည်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည် earned ၀ ံဂေလိဆရာကိုဘာသာရေးဖက်ဒရယ်ဝါဒနှင့်အပြည့်အဝမှတ်တမ်းတင်ထားသည်.
အကြင်သူသည်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်၏၊ ပထမကျောက်ကိုပစ်ချလော့။ ၀ င်းဒိုးသားများသာကျောက်ခဲပစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျောက်ခဲမိုးရွာလိမ့်မည်။
n3 မုန်တိုင်း ဟုသူကပြောသည်
စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ ၀ ယ်ယူခြင်းကိုဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) tools များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ရောနှောခြင်းသည်မှားသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ကျင့် ၀ တ်နှင့်ရပ်ရွာလူထုကိုမပါဘဲ၊ ကျွန်ုပ်သည်အသုံးပြုသူအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတွင်သာမကအခြားတစ်ခုတွင်ပါသက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ ၎င်းကိုစိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး မှဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားများသည်အပိုင်းလိုက်ကွဲလွဲနေပြီး“ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမှ ** ** ဘာသာရပ်ကိုအလွန်အမင်းကြောက်စရာကောင်းသည်” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုခွင့်မလွှတ်ပါ။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်တူညီသောစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပြီးသန်းနှင့်ချီသောလူများအတွက်အသုံးပြုရန်မှာအရေးမကြီးပါ က။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အရင်းရှင်စနစ်၏စားသုံးမှုဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများကိုရှင်းပြရန်အချိန်အတိအကျမရှိသေးပါ။ အနှစ် ၁၀၀၊ ၂၀၀ အတွင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ဆိုလိုတာရဲ့အယူအဆကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဟာအခုရှိနေတဲ့တစ်ခုထက်ပိုပြီးရည်မှန်းချက်ကြီးပြီးတစ်ယောက်ချင်းစီကကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆွဲယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသည်အရင်းရှင်စနစ်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) အားပုံမှန်မဟုတ်သည့်အရာအဖြစ်ယူမှတ်သည်။ နှင့်အထက်, အရည်အသွေးညံ့ဖျင်း) ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကိရိယာ၏အရည်အသွေးကြောင့်မဟုတ်ဘဲ၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသိရှိရန်ဖြစ်သည်။
မဟုတ်ရင်ကျွန်ုပ်တို့ကပိုဆိုးတဲ့မှားယွင်းတဲ့မှားယွင်းတဲ့မှားယွင်းတဲ့မှားယွင်းတဲ့အမှားအယွင်းထဲရောက်သွားလိမ့်မယ်။ သင်ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ် (Windows, OSX, GNU / LInux)၊ အခြားနည်းလမ်းများဖယ်ထုတ်ခြင်း (BSD, Haiku, OpenSolaris, စသဖြင့်) ထဲမှမှားယွင်းသောအကြပ်အတည်းထဲရောက်သွားလိမ့်မည်။
မဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားပိုမိုဆိုးရွားသည့်မှားယွင်းသောမှားယွင်းသောလမ်းစဉ်ထဲရောက်သွားလိမ့်မည်။ မှားယွင်းသောအကျပ်ရိုက်မှု၊ သင်ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ် (၀ င်းဒိုး၊ OSX၊ Ubuntu) အကြားရွေးချယ်ခြင်း၊ အခြားနည်းလမ်းများ (အခြား Linux distros, BSD, Haiku, OpenSolaris) စသည်တို့ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြောင့် Linux Compatibility ကို Ubuntu (... ကျန်တဲ့ကျန်တာတွေ) ဆီသို့ ဦး တည်ဖို့ကြိုးစားသင့်သည်။
ငါ Gnu / Linux လောကတွင်ရွေးစရာတစ်ခုရွေးချယ်ပြီး၎င်းသည်မှားသည်၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကမသင့်တော်ကြောင်းသဘောပေါက်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာဥပမာကားတစ်စီး ၀ ယ်ပြီးနောက်လောင်စာအမြောက်အများအသုံးပြုသည်ကိုသတိပြုမိလျှင်၎င်းသည်အခြားရွေးချယ်စရာများထက်လှပသော်လည်း၎င်းသည်အမြတ်အစွန်းမဟုတ်၊ အခြားဝယ်ရန်ဝယ်လျှင်၎င်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ သင်ပိုက်ဆံနှင့်အချိန်အများကြီးဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သင် linux distro ကိုစမ်းကြည့်ပြီးသင့်ကိုမယုံလျှင်သင်ဟာခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းများမရှိဘဲအခြားအရာတစ်ခုအတွက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး distro နှင့်သင်မနေပါကသင်လေ့လာသင်ယူခြင်း မှလွဲ၍ ၎င်း၏သီလနှင့်ချို့ယွင်းချက်များကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည် အကယ်၍ တစ်နေ့သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်သင့်အားအကြံဥာဏ်တောင်းခံသူတစ် ဦး ဦး ကပိုသင့်တော်လျှင်အပြန်အလှန်ပြောင်းလဲပါ
သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အလုပ်များသူဖြစ်ပြီး distros များကိုစမ်းသပ်ရန်မတတ်နိုင်လျှင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
distros များကိုလူသိများသော distros များနှင့်လူသိများသော distros များကိုအသုံးပြုသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရှာဖွေပါ၊ ထို့ကြောင့်သင့်အရေပြားကိုစွန့်လွှတ်စရာမလိုတော့သည့်အတွက်သင်တစ် ဦး နှင့်တစ်ခြား distro ကိုအချိန်ဖြုန်းစရာမလိုပါ။
ထိုဆိုဒ်များအားလုံးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သာ ubuntu ကိုအကြံပြုသည်။
ကောင်းပြီကျွန်တော်က Mint ကိုအကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် windowsers တွေပျောက်မသွားအောင် Ubuntu နဲ့ Debian ကြားကဘောလုံးအများကြီးမရစေဖို့ပါ။
GNU / Linux တွင်၎င်းကိုတည်ဆောက်ပြီးဖြစ်သောလူအမျိုးမျိုးအတွက် distros များရှိသည်။ သာမန်လူများအနေဖြင့် Ubuntu သည်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်မှာထင်ရှားသည်။ ၎င်းသည် ၁၀၀% အမြင်အာရုံစီမံခန့်ခွဲမှုကိုအာရုံစိုက်သောကြောင့် (console level တွင်မဟုတ်) ငါကြိုးစားခဲ့သည်။ ဝမ်းသာစရာက Mint လို Ubuntu ဗားရှင်းတွေတိုးတက်လာတာက console နဲ့ graphical level မှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ဤကမ္ဘာ၏ GNU / Linux ကမ္ဘာကြီးသို့ကျွန်ုပ်သွားသောလမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ပြောရမည်မှာကျွန်ုပ်စတင်ခဲ့သည့်ပထမ ဦး ဆုံး distr သည် Mandrake 1 ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းသော်လည်း packets များ၏အပြောင်းအလဲသည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကတော့ငါအခုထိရှိနေတဲ့ Ubuntu နဲ့မတူဘဲပိုပြီးသက်သာမှုခံစားခဲ့ရတဲ့ Debian ပါ။
အခုတော့ငါ Slackware နဲ့ CentOS လိုမျိုးတခြား distros တွေကိုစမ်းသပ်နေတယ် (my paranoia သွားတယ်) တစ်ခုတည်းသော distro ထဲကို ၀ င်မသွားဖို့ဒါကငါ့ကို GNU / Linux စကွဝaboutာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးပိုကောင်းတဲ့အမြင်ကိုပေးတယ်။
ကျနော့်အမြင်တွင်အသုံးပြုသူအနေဖြင့်စနစ်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲစေသောကွဲပြားခြားနားသောအသစ်သောအရာများကိုကြိုးစားလိုသည်။ ငါရွေးချယ်မှုအသစ်များသည်သုံးစွဲသူများအသစ်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းဖြင့်လွှမ်းမိုးသွားသည်ဟုမထင်ပါ။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့် Linux လောကတွင်လူကြိုက်အများဆုံး distros များနှင့် KDE, Gnome, Xfce ကဲ့သို့သောအသုံးအများဆုံးပတ်ဝန်းကျင်များမှ ၀ င်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
လျောက်ပတ်သောဗီဒီယိုဖွင့်စက်မရှိပါ။ VLC နှင့် mplayer သဘောမတူပါ
VLC သည်ဗီဒီယိုဖွင့်စက်တစ်ခုအနေဖြင့်ကြီးမားသည်၊ သို့သော် Gimp ကိုနိုင်သူ Krita သည် Photoshop နှင့်မတူထူးခြားသည့်အရာဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ Krita က Gimp ထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူက P $ နဲ့ဆင်တူပေမယ့်သူ့ရဲ့အရောင်တွေကိုကိုင်တွယ်နိုင်မှုကြောင့် (CMKY, color per 16 bits, etc)၊ Gimp ကအကောင်အထည်ဖော်နေပြီးမကြာခင်မှာပဲအကောင်အထည်ဖော်နေပါတယ်။ သူတို့က GEGL နဲ့ GTK +3(စောင့်ဆိုင်းမှုအဆုံးမဲ့ပုံရတယ်) ကိုအပြီးသတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Krita ကိုထပ်ပြီးကျော်လွှားနိုင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။
Krita ကကောင်းတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းအတွက်အထူးထုတ်လုပ်ထားတာ။ အခုတော့ပျောက်နေမှာက GIMP ဟာသူတို့ရဲ့ကိရိယာတွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအလွယ်တကူသုံးနိုင်အောင်၊ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်တယ်။
ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာကွန်ကရစ်အကြောင်းပြောနိုင်တယ်။ laptop ကျွန်ုပ်၏လက်တော့ပ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုသိသိသာသာလျှော့ချပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တကယ်လက်လွတ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏လက်တော့သည်မြင်ကွင်းကျယ်ပေမယ့် Optimus နည်းပညာဖြင့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ပြားပါရှိသည်။ အမှန်မှာ Debian မိသားစု၏ဖြန့်ဖြူးမှုများကကျွန်ုပ်အားကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောမြင်ကွင်းကျယ်ပုံစံကိုအသိအမှတ်ပြုသည် (ကျန် ၁၉၀၀ × ၁၀၈၀ တွင်သာအသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ xrandr ဖြင့်ပိုမိုသောပုံစံများထုတ်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အမြဲတမ်းပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်) ။ ဒါကြောင့်အဆုံးမှာတော့ဖြန့်ချိရေးကိုသုံးပြီးစမ်းသပ်နိုင်တာကိုတော့မေ့သွားတယ်။ Debian 1900 ကငါ့ကိုမစတော့ဘူးဆိုတာ Ubuntu နဲ့ derivatives တွေသာကျန်တော့တာငါအတည်ပြုပြီးကတည်းက။
ကျွန်ုပ်တွင် Optimus နည်းပညာဖြင့် Asus N73 ရှိပြီး၎င်းသည် Debian7နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ငါ Debian repositories ကနေ Bumblebee ကို install လုပ်ပြီး Dual display အတွက် Arandr ကိုသုံးတယ် (resolution ကိုပြောင်းဖို့ဒါမှမဟုတ် xrandr (သို့) ဘာမှသုံးစရာမလိုဘူး) 1600x900 ။
ငါ XFCE desktop ကိုသုံးပြီး web နှင့် python အပြင်၊ ဒီဇိုင်းအစုံတစ်ခုလုံးကို Gimp, Inkscape, Scribus နှင့် Blender တို့ကိုအသုံးပြုသည်။
သင်၏ပြproblemနာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါ။ ဖိုရမ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သင့်အားကူညီနိူင်ပါသည်။
ငါမှတ်ချက်ဖတ်ချင်သည်။ သို့မဟုတ်လူများသည်ယဉ်ကျေးစွာသဘောမတူသောခေါင်းစဉ်၊ စော်ကားမှု၊ နှိုင်းယှဉ်မှုများနှင့်စိတ်စွန်းကွက်မှုများထဲမ ၀ င်ဘဲအကြောင်းအရာတခုခုကိုသာဖတ်ရှုချင်သည်။ မှတ်ချက်ဖတ်ခြင်းသည်အခြားအသုံးပြုသူကို ဦး တည်သည့်စော်ကားမှုကိုမခံရဘဲ ၀ မ်းသာစရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘာသာစကားသိပ်မသင့်တော်သောကြောင့်ခေါင်းစဉ်နှင့်စသည်တို့မှလွဲသွားစေသည့်ခေါင်းစဉ်များမပြည့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, အဖြေမပေးမီ, စဉ်းစားပါ, ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်
တောင်းပန်ပြီးကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောမသင့်တော်တဲ့စကားကအပြစ်ရှိတယ်။ ဒီချည်ထဲမှာဘာမှတ်ချက်တွေစော်ကားသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှု? ဘယ်လိုစိတ်စွန်းကွက်မျိုးကိုသင်ဆိုလိုသလဲ
Red Hat သည် Linux ကိုလူသိရှင်ကြားတွန်းအားပေးခဲ့ပြီးနောက်နောက်ပိုင်းတွင် IBM နှင့်အခြားလေးနက်သောကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသည် Linux (ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်ကျော်ကပြောနေသည်) ကိုအထောက်အပံ့ပေးသောကြောင့်ဤမေးခွန်းမှာအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးသည်ခေါင်းစဉ်အနေဖြင့် (အခြားသူများအပြင်) သည်အသုံးပြုသူနှင့်ကုမ္ပဏီအတွက်အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားများကိုကတိက ၀ တ်ပြုထားပြီးဤလုပ်ဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ Gimp-es, Gnome-Hispano, Hispalinux, Gleduc-ar စသည့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများမှအသင်း ၀ င်များဖြစ်သည့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကို အခြေခံ၍ စီးပွားရေးလောကတွင်ပါ ၀ င်ပြီးစီမံကိန်းအမျိုးမျိုးအတွက်ပါ ၀ င်သောသုံးစွဲသူများကိုဤမေးခွန်းနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာလျှို့ဝှက်ထားခဲ့ကြ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ Linux ကိုလူတွေကတည်ဆောက်တာ၊ ငါတို့မှာခံစားချက်တွေရှိတယ်၊
ယိုယွင်းနေသောအမှားများနှင့်လိမ်လည်မှုများကိုဒေါသထွက်ရန်စွမ်းရည်ကိုမဖယ်ရှားပါနှင့်။ ၎င်းသည်ရပ်ရွာကိုကြားနေမှုနှင့် aseptic အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Nvidia ကိုလက်ညှိုးမပြရန် Linus Torvalds ကိုသင်မေးမည်လား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို Linus နဲ့မနှိုင်းယှဉ်ချင်ဘူး။
Linus Torvalds ကို Nvidia ကိုလက်ညှိုးမပြရန်သင်မေးမည်လား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို Linus နဲ့မနှိုင်းယှဉ်ချင်ဘူး။ ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလူပဲ။
Linux ဘာသာတရားတွင်အမှုပေါ် မူတည်၍ အထူးနှစ်ဆသောစံနှုန်းများ / ကျင့် ၀ တ်များရှိသည်။
မင်္ဂလာပါ @Ares မင်၊ စံသတ်မှတ်ချက်များကိုမည်သည့်အချိန်တွင်အသုံးပြုသည်ကိုဥပမာပေးပါ။
ငါအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာတစ်ခုခုအတည်ပြုပြီဆိုရင်, သူသည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းသောသူအပေါင်းတို့သည်ကောင်းသောအဘို့အကောင်းလုပ်နေတာသည်မိမိကိုယ်ပိုင်တန်ရာအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမကောင်းဘူးလား သို့သျောလညျး, အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးအမြဲတမ်းနည်းနည်းပါဝင်သူတစ် ဦး မှအများကြီးပါဝင်သူမှသည်အစဉ်အမြဲတန်ဖိုးထားသည်။
အဆိုပါအငြင်းအခုံနည်းနည်းဆင်းရဲသောသူသည်များစွာသောအမှုအရာလျစ်လျူရှု။ လွတ်လပ်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများသည်ပညာရေးမှသည်ဖျော်ဖြေရေးအထိကဏ္areasများစွာတွင်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ မည်သူမဆိုမိမိကိုယ်တိုင် distro လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်သုံးစွဲသူများအားအထူးစိတ်ကြိုက်အဆင့်ကိုပေးထားပြီး၎င်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးမှအလွန်သဘောကျနှစ်သက်ကြသည်။ Distros အားလုံးသည်အသုံးပြုသူအားလုံးအတွက်အသုံးမဝင်ပါ။ Scientific Linux ကဲ့သို့ဖြန့်ဝေမှုများကော။ ဒါ့အပြင်သူရေးသားသူအနည်းငယ်ခေတ်မမီတော့အမြင်ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကတော်တော်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ စျေးကွက်အသစ်တွေပေါ်လာတယ်၊ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်တွေ၊ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းသည်လက်ရှိထောက်ပံ့ရေးကိုခေတ်မမီတော့သောကြောင့်မလုံလောက်ပါက“ အလွန်အမင်းထောက်ပံ့မှု” နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောမတူပါ။
အကောင်းဆုံး Linuxero Desktop: မေလ ၂၀၁၃ - ရလဒ်
LightDM GTK + Greeter 1.6.0 ရရှိနိုင်သည်